Umboniso wekhalenda | Creatives Online
Encarni Arcoya | | Ukuphefumlelwa
Sinezinto ezininzi nangakumbi ezingqondweni zethu: ukuqeshwa kwezonyango, imisitho esiya kuyo, imisebenzi yemihla ngemihla, njl. Kwaye loo nto ibangela ukuba sifune ukuthwala i-ajenda okanye, umzekelo, i-calendar mockup.
Kodwa, Yintoni ikhalenda yomfanekiso? Inokusenzela ntoni? Ngaba unayo imisebenzi yeprojekthi yomzobi? Ukuba uyazibuza yonke le nto, nazi iimpendulo.
1 Yintoni i-mockup
2 Kutheni usebenzise enye
3 Uyenza njani ikhalenda yekhalenda
4 Imizekelo yekhalenda ye-mockups
4.2 Envato element
4.4 Iikhalenda zedesika
4.5 Ikhalenda eludongeni
4.6 Ukrolo lwekhalenda eludongeni
4.7 Ikhalenda yakudala
Into yokuqala kukwazi ukuba yintoni i-mockup. Imalunga ne ifotomontage apho umyili wegraphic ahlanganisa ngokufanelekileyo uyilo. Umzekelo, khawucinge ukuba unoyilo lwe-t-shirt olugunyaziswe ngumthengi. Kwaye ufuna ukumbonisa olo yilo olusengqiqweni kangangoko kunokwenzeka. Kodwa ke, ukwenza oko kuya kufuneka uye evenkileni apho benza khona i-t-shirts yesiko, uyihlawule kwaye ulinde ukuba bakunike yona. Kuthekani ukuba awuyithandi ukuyila? Ngaba kuya kufuneka ubuyele emsebenzini kwaye utyale imali ukuze uyikhuphe kwakhona?
Ukunqanda oku, ii-mockups zisetyenziswa kuba ungasebenzisa umfanekiso oqinisekileyo wendlela uyilo oluya kujongeka ngayo kwihempe yokwenyani.
Sinokucinga okufanayo ngeqweqwe lencwadi, incwadi yokubhalela, ibhodi yokutyibiliza, njl. Kwaye, kunjalo, nakwikhalenda.
Kutheni usebenzise enye
I-mockup yekhalenda inosetyenziso oluninzi ngokuxhomekeke kuyilo lwayo. Ngokomzekelo, khawube nomfanekiso-ngqondweni wekhalenda enkulu, uhlobo olujinga eludongeni. Kungenzeka ukuba umxhasi uyalele ukuba uyile iikhalenda abaza kuzinika abasebenzi kunye nabaxumi babo kwaye bafuna ukuba ubalungiselele.
Olunye ukhetho, ikhalenda ukuze ikwazi ukubhala phantsi zonke idinga kunye neziganeko ezibalulekileyo ukuze yonke into ibonakaliswe kakuhle kwaye ihambelana negama lomntu okanye inkampani (ukuze wonke umntu asebenzise inkqubo efanayo).
Njengoko ubona, inokwenzeka kwaye ikuvumela ukuba ube ne ulungelelwaniso nolawulo kwimisebenzi eza kwenziwa. Kuthetha ntoni oku? Ulungelelwano olukhulu, uxinezeleko oluncinane nolwaneliseko olungakumbi ngenxa yokuba umntu ubona indlela awenza ngayo umsebenzi ngamnye ngaphandle kokulibala nto.
Uyenza njani ikhalenda yekhalenda
Ukwenza i-mockup yekhalenda akunzima. Njengoko usazi, ikhalenda yenziwe ziinyanga ezili-12, nto leyo eqhelekileyo. Ngoku, uyilo onokuthi umxhasi wakho alucele luyahluka. Umzekelo:
Ikhalenda apho iinyanga ezili-12 zivela kwiphepha elinye. Ngokuqhelekileyo, kule meko, i-mockup iya kwenziwa ngefomathi ye-A3 ukubandakanya zonke iinyanga. Ezi zinokuba zincinci, kodwa zanele ukuba zibonwe iintsuku kunye neenyanga ngaphandle kwengxaki. Isenokwenziwa nkulu (ezifana nee-A3 ezimbini ezidityanisiweyo kunye) ukwandisa ubungakanani bokugqibela.
Ikhalenda ebandakanya iinyanga ezi-3. Ngokomzekelo, uJanuwari, uFebruwari noMatshi kwiphepha elinye; Epreli, ngoMeyi nangoJuni kwenye, njl.
Iikhalenda ezineefoto. Eyona nto ixhaphakileyo kukuba inyanga nganye ithatha ifoto, nangona ezi zingasetyenziswanga kwaye zisetyenziselwa kuphela iikhalenda zobumbano kuba uninzi lukhetha umfanekiso omnye kunye neenyanga ezingaphantsi kwe-die-cut ukukrazula amaphepha njengoko iinyanga zihamba. nge.
Ngaba kufuneka sithathele ingqalelo konke oku kuyilo? Kakade ke, akufani ukwenza ikhalenda yephepha elinye kuneshumi elinesibini kunye neqweqwe.
Iinyanga awunayo ingxaki enkulu yokuyila, kuba kukho iitemplates, kwaye kwenzeka into efanayo ngekhalenda mockups. Ukuba awufuni ukuzenza, okanye uyafuna sebenzisa itemplate ukuyiguqula ngokuthanda kwakho kwaye usebenze kuyilo lwakho ngesiseko, unokuthatha inzuzo kwaye uyisebenzise.
Kodwa ukuba ufuna ukwenza ngokwakho, kufuneka uthathele ingqalelo:
Umfanekiso okanye imifanekiso ofanele ukuyisebenzisa.
I-typography yamanani, kodwa kunye nesicatshulwa (kuba ezinye iinkampani zifuna ukubandakanya amagama abo, iwebhusayithi, njl.).
Ikhalenda (oko kulula).
Kuya kubakho ubuchule obuncinci obushiyekileyo kunye neenkqubo zoyilo lomfanekiso ukuya kwiphepha ngalinye okanye elikhulu elinazo zonke iinyanga kunye.
Imizekelo yekhalenda ye-mockups
Njengoko sisazi ukuba eyona ndlela ilungileyo yokubona ukuba yeyiphi ikhalenda enokuba yintoni imockups kukukubonisa imizekelo, nanga amanye amaphepha apho uya kufumana iimockups kunye noyilo oluthile olunokuba nomdla, zombini kwinqanaba lomntu / lobuchwephesha, kunye kubaxumi.
Kule meko sinayo ngaphezulu kwe-3000 yezixhobo zekhalenda, ezinye eziya kusinceda ukubonisa umxhasi ukuba iikhalenda zingajongeka njani kwaye ezinye ezinokukunceda ubone indlela yokudibanisa enye enje.
Kule meko kufuneka ukhumbule ukuba i- Uninzi lwezinto oza kuzibona apha zihlawulwe. Nangona kunjalo, ezinye azibizi kakhulu kwaye unokuzithathela ingqalelo, ngakumbi ukuba unabathengi abadla ngokukubuza ezi projekthi kuba iyindlela yokuziveza ngendlela eyiyo.
Elinye iphepha lokufumana ikhalenda mockups yile. Ngokwenyani, uneentlobo ezininzi, nangona ngokwenene Ayisiyo ikholaji eninzi njengesiphumo sokusebenza kwikhalenda.
Njengendlela yezimvo, inokukusebenzela.
Ukuba umxhasi wakho, okanye wena, ufuna ikhalenda yedesika, uhlobo olu abancinci kunye neenyanga zihamba njengoko udlula amagqabi ukusuka ngaphambili ukuya ngasemvaNantsi i-mockup eya kubonisa ikhava kunye neefoto zangaphakathi.
Kule meko, le khalenda ibalasele ngenxa yokuba, kwiphepha elinye, uneenyanga ezintathu. Ngapha koko, njengoko injalo, sinokucinga ukuba umxhasi uza kuzicima iinyanga ezintathu ngexesha ukuze umsebenzisi azisuse kancinci kancinci.
Imvelaphi iya kuba ngumfanekiso oya kubandakanya neenyanga.
Ukrolo lwekhalenda eludongeni
Enye yeekhalenda zodonga yile. Kule meko kuya kuba njalo iinyanga ezimbini kwiphepha ngalinye kwaye uthembele ngakumbi ubeko lokubhaliweyo kunye namanani kunokuba kuquka imifanekiso.
Ngaba uyafuna ikhalenda yakudala? Kwezo ukuba ngaba bekukho ishiti elinye ngenyanga kunye nomfanekiso omnye kwinto nganye? Ewe, nantsi i-mockup enokukunceda ubonise umxhasi wakho.
Njengoko ubona, kukho iindlela ezininzi zokwenza i-mockups yekhalenda, nokuba yinyanga nganye okanye ngenyanga ukuze usebenze kuyo. Yeyiphi ongayikhetha ukubonisa uyilo lwakho kumxhasi wakho?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Umboniso wekhalenda
Iilogo zamaqela akhuphisanayo
Imizekelo yeemenyu zokutyela